खुकुलो बन्दाबन्दीले निजी सवारी साधन नहुनेको बेहाल
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले शुक्रबारदेखि निजी सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको र एउटा मोटरसाइकलमा दुई जना बस्न नपाइने सुनाए।
मन्त्रिपरिषदले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने निर्णय त गरेको छ तर निजी सवारी हुनेका लागि मात्रै । त्यसैले पनि सरकारको निर्णय निजी सवारी साधन नहुनेहरूले आपत्ति जनाए।
बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि पसल तथा केही गैरसरकारी कार्यलयहरू पनि खुल्न थालेका छन् । तर सरकारले गरेको सवारी साधन सम्बन्धी निर्णयले निजी सवारी साधन नहुने व्यवसायी र कर्मचारीलाई भने समस्या परेको छ।
ललितपुरको ज्वागल बस्ने कविता लामा जावलाखेलस्थित गैरसरकारी संस्थामा काम गर्छिन् । उनको निजी सवारी छैन, कार्यालय सञ्चालन भइसक्यो । बाध्यताले उनी पैदलै ज्वागलदेखि जावलाखेल र जावलाखेलदेखि ज्वागल पुग्छिन।
शुक्रबार उनलाई अफिसको कामले धुम्बाराही जानैपर्ने अवस्था आइलाग्यो । आफ्नो निजी सवारी साधन छैन, अफिसको गाडी पनि छैन । उनी जावलाखेलदेखि धुम्बाराही करीब अढाई घन्टा लामो यात्रा हिँडेरै पुगिन्, हिँडेरै फर्किइन् ।
"बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि झनै समस्या भयो । मोटरसाइकलमा दुई जना पनि बस्न नपाउने रे ! सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने । कस्को गाडी खोज्न जानु अब ?," कविताले उपाय बिना खुकुलो पारिएको बन्दाबन्दीको समर्थन गर्न नसकिने अर्थमा भनिन् "आज अढाई घन्टा पुग्न र अढाई घन्टा फर्किन लाग्यो । म जस्ता निजी सवारी साधन नहुनेका लागि निश्चित सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन हुनुपर्छ ।"
ललितपुरको चाकुपाट बस्ने टंकबहादुर कार्की मिठाई पसलमा काम गर्न हरेक दिन बानेश्वर धाउँछन् । बन्दाबन्दी भएको अढाई महीनापछि काममा जान थालेका उनी बिहान पाँच बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म काम गर्छन्।
यसअघि बन्दाबन्दीकै समयमा उनी एउटै पसलमा काम गर्ने साथीको मोटरसाइकलमा चढेर जान्थे । जब सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनायो, उनको दु:ख शुरु भयो।
उनी शुक्रबार पनि बिहान साथीको मोटरसाइकलमा नै बानेश्वर पुगेका थिए, तर दिउँसो फर्किँदा भने हिँडेर आउनुपर्‍यो।
जेठको चर्को घाममा हिँड्न परेपछि सरकारको अपरिपक्व निर्णयप्रति आक्रोशित कार्कीले भने, "अस्ति बन्द गरेर, अहिले खुकुलो पारेर आर्थिक विपन्न भएका जनताको मजाक उडाउँदैछ सरकार।"
भक्तपुरको सानोठिमी बस्ने चेतन कार्कीको कार्यालय ललितपुरको जावलाखेलमा छ । एक महीना अघिदेखि कार्यालय आउन थालेका उनी साथीभाइको मोटरसाइकलमा ओहाेरदोहाेर गरिरहेका थिए । अब मोटरसाइकलमा दुई जना बस्न नदिने भएपछि उनका दु:खका दिन बल्ल शुरु भएका छन्।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने कार्कीलाई बन्दाबन्दीपछि श्रीमतीले स्कूटरमा कार्यालयसम्म पुर्‍याउने र लिन आउने गर्थिन् । अब पछाडि पनि चढ्न नपाउने भएपछि उनी समस्यामा परेका छन् । "अब खै के गर्ने हो । नजिकै भए त हिँडेर पनि जान आउन सकिन्थ्यो । यत्ति टाढा त सम्भव नै छैन," उनी सरकारको निर्णय देखेर आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् "घर परिवार रात दिन सँगै हुँदा नसर्ने कोरोना, श्रीमतीले चलाएको स्कूटरमा पछाडि बस्दा सर्ने रे ! अचम्मकै हुँदो रहेछ।"
सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो पारेपछि निश्चित समयमा निश्चित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । "सरकारले निजी सवारीलाई मात्रै अनुमति दिएर विपन्न जनताको खिल्ली उडाउँदैछ," उनले भने।
अहिलेलाई भने कार्की दम्पतीले भने तत्कालको समाधान आफैले खोजेका छन्, बिहान ४ बजे कार्यालय आउने र राति ८ बजे घर फर्कने । किनभने उक्त समयमा चेकजाँच हुँदैन।
कार्कीले भने "आज बिहान चारै बजे अफिस आएँ, अब भरै ८ बजे श्रीमती लिन आउँछिन् । के गर्नु उपाय त जसरी पनि निकाल्नै पर्‍यो।"
गाउँ गएकालाई पनि सकस
सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने निर्णय गरेपछि कार्यालय बन्द भएर गाउँ गएकाहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् । काठमाडौंको चक्रपथको एउटा निजी संस्थामा काम गर्ने विक्रम थापा बन्दाबन्दी भएपछि साथीसँग चितवनस्थित घर गए।
बिहीबार मात्रै उनलाई अफिसबाट फोन आयो, "सम्भव भएसम्म आइतबारदेखि अफिस आउनू ।" अहिले आएर उनी फसादमा परेका छन्।
सरकारले उपत्यका भन्दा बाहेकका जिल्लालाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान दिएको छैन । उनी काम गर्ने महामारीमा अफिसले कर्मचारी कटौती गर्दा पनि जोगिएका उनको जागिर सरकारको निर्णयले धरापमा परेको छ । "बन्दाबन्दी खुकुलो पारेपछि अफिस खुलेछ । जाऊँ भने सरकारले नै जान दिँदैन, नजाऊँ भने जागिर रहँदैन । टेन्सन भइसक्यो," उनी विकल्प खोजिरहेका छन्।
झापाकी बन्दना सुब्बा काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित निजी कम्पनीमा काम गर्छिन् । बन्दाबन्दी शुरु भएपछि स्थानीय तहले आफ्ना नागरिक लिन गाडी पठाएपछि उनी पनि घर गइन् । अहिले उनी घरैमा छिन्, सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएपछि अफिस खुलिसक्यो । अब के गर्ने उनले सोच्नै सकेकी छैनन्।
अहिले निजी कम्पनीहरूले कर्मचारी कटौती गरिरहेको बेला अफिस नजाँदा रोजीरोटी गुम्ने चिन्ता छ भने जाने उपाय छैन । "मेरै कति साथीहरूलाई अफिसले बिदा दिइसक्यो । मेरो पनि जाला भन्ने डर भयो," उनको चिन्ता छ "यो जागिर गयो भने पढाइ खर्च र काठमाडौं टिक्न सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाले त समस्या ल्यायो नै सरकारले पनि अप्ठ्यारोमा पार्‍यो।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जीवन कुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय कडाइका साथ लागू गरिरहेको बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, संचारकर्मी र बिरामी बोकेकोलाई भने छुट दिइरहेको उनको भनाइ थियो।